Ezinye iiapps ziqala ukubonelela ngeewijethi zeXL ze-iPadOS 15 | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | 24/09/2021 20:00 | Iapps zokusebenza, iOS 15
I-iPadOS 15 inyuse i- mveliso Inkqubo yokusebenza ngokubhekisele kwi-iPadOS 14. Ukudityaniswa kwelayibrari yeapps okanye ukwenziwa ngokutsha kwemisebenzi emininzi kwenza ukuba ukusebenza kwe-iPad kusebenze ngakumbi kwaye kwangaxeshanye kukhawuleze kwaye kube luncedo ngakumbi kumsebenzisi. Enye into entsha efikileyo yile Iijethi zeXL, enkulu evumela ukubonisa ulwazi ngakumbi ngazo zonke iintlobo kwaye ababhekisi phambili banokudala usetyenziso lwabo. Inyaniso, Usetyenziso oluninzi luhlaziya kwaye lukhupha iiwijethi zazo kwifomathi yeXL njengezinto ze3, zeFantastical okanye zeCARROT Weather.
Umxholo ongaphezulu kwiiwijethi ze-XL ze-iPad kunye ne-iPadOS 15
Ngoku ungabeka iiwijethi phakathi kweapps kwi-iPad yakho. Zikwakhona ngobukhulu obukhulu ukusebenzisa ngokupheleleyo isikrini.
Izinto ezi-3 yenye yezona zixhobo zikhutshelweyo zemveliso kwiVenkile ye App. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ihlaziyiwe kuhlobo lwe-3.15 kwaye yazisa amanqaku amatsha kwizixhobo ezine-iOS 15 kunye ne-iPadOS 15. Iwijethi zayo ze-XL ze-iPad ziyafumaneka kule nguqulo. Imalunga newijethi Ke kwaye enye inikezela uluhlu olukhethekileyo ukubona umxholo ngakumbi malunga noluhlu lwethu.
Ngokujonga nje sinokubona uluhlu lwethu ecaleni kwescreen kwaye singene kuzo kwaye sinxibelelane nezinto ezivela kwiscreen sasekhaya. Ukongeza, ezi wijethi zinokuguqulwa ngokwemixholo yazo okanye ngokufikelela ngokuthe ngqo ekudalweni kwemisebenzi emitsha.
Izinto 3€ 9,99
I-YouTube ikwazise iiwijethi zayo ze-XL ze-iPadOS 15. Ukongeza kwiYouTube, zikwafumana iiwijethi ezintsha zeefoto zikaGoogle. Ziya kufumaneka kwiintsuku ezizayo kwaye ziya kuba nemisebenzi efanayo naleyo sele ikho namhlanje kodwa ngobukhulu obukhulu. Kwimeko yeYouTube, isivumela ukuba sifikelele kutshanje kumculo, amagcisa kunye neealbham. Kwimeko yeefoto zikaGoogle, sinokuba nemifanekiso esiyifunayo ngobukhulu obukhulu ukunika ukubonwa kobuqu kwi-iPad yethu.
IiFlexibits zokusebenza zikwafumene iiwijethi ezintsha. Kwimeko yeFantastical, unokufikelela kwikhalenda enkulu kakhulu enecandelo elikhethekileyo apho zonke iziganeko eziphawulwe ngodidi oluhambelanayo kunye nekhalenda zivela. Ukongeza, ivumela ukufikelela kwiintlanganiso ze-telematic ngokucofa iqhosha.
Ngekhowudi yombala, iFantastical ikuvumela ukuba uhlele iintsuku zeveki ngokusekwe kwiminyhadala onayo kwaye uxakeke kangakanani ngezo ntsuku. Ngezi widgets ze-XL lo mxholo unokufikelela ngokulula nangokubonakalayo.
Yimanga- Ikhalenda kunye neMisebenziMahala
IOS 15 kunye ne-iPadOS 15 zilapha, konke oku kufuneka ukwazi ngaphambi kokuhlaziya
Okokugqibela sinemozulu yeCARROT, usetyenziso olwahlukileyo lokujonga imozulu. Ngokusebenzisa imizobo kunye nee icon zazo zonke iintlobo kwenzelwe ukunika uqikelelo lwemozulu olupheleleyo. Ngokuhlaziywa okutsha, iiwijethi ezimbini ze-XL zongezwe ezinokuphucula ukusebenza kwazo ngolwazi oluthe kratya ngokubhaliselwa kwePremiyamu kunye ne-Ultra.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » Ezinye iiapps ziqala ukubonelela ngeewijethi zeXL ze-iPadOS 15